Afatory ny fehikibo fehikibo na fantsom-pandefasana: Fitaovana fiarovam-piaramanidina vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Afatory ny fehikibo fehikibo na fantsom-pandefasana: Fitaovana fiarovam-piaramanidina vaovao
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fitaterana • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Dape Tape: Fitaovana fiarovam-piaramanidina vaovao
Matetika ary matetika, ireo mpandeha fiaramanidina tsy voafehy dia tototry ny mpiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny fantsona fantsona. Ary maninona no tsy? Mahery izy io, azo antoka, izany no antony nilazan'ilay reny maoderina maranitra ny zanany hoe: “Duct tape. Aza miala ao an-trano raha tsy misy an'io. ”
Ny fantsona fantsona dia nesorina ho fidirana ho an'ny fiaramanidina fiarovam-piaramanidina izay tena ilaina tokoa ny fanakanana ny mpandeha iray.
Tao anatin'ny iray volana lasa fotsiny dia farafaharatsiny farafaharatsiny tranga roa no nitaky ny fampiasana fantsom-panafody mba hiarovana ireo mpandeha tsy voafehy intsony any amin'ny toerany.
Mety misy ny famantarana ny zava-miafina amin'ny fisian'ny fantsom-pandefasana fantsom-pifandraisana vao haingana teo ambonin'ny fiaramanidina mpandeha iray.
Notaterin'ny American Airlines ny talata lasa teo fa adiny iray taorian'ny fiainganana niainga avy any Maui nankany Los Angeles dia voatery navily nankany Honolulu ilay fiaramanidina rehefa avy nanakorontana ny zazalahy iray 13 taona.
Nilaza ireo nanatri-maso fa nanandrana nandaka teo am-baravarankely teo akaikin'ny sezany ilay zazalahy ary nanjary ara-batana tamin'ny reniny ihany koa. Nanomboka niakatra adiny iray teo ho eo ny sidina ka nahatonga ilay mpanamory namily ny fiaramanidina.
Nilaza ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka fa nampiasaina ny cuffs flex mba hanakanana ilay zazalahy, fa ny horonan-tsary koa dia naneho fantsom-piaramanidina mpiandry sidina nanidy azy teo amin'ny sezany.
Tonga soa aman-tsara ny sidina, ary napetraka tamin'ny sidina hafa ny mpandeha na nomena efitrano fandraisam-bahiny.
Dape Tape: Ny fomba vaovao momba ny fiarovana ny sidina
Na izany na tsy izany, nesorina ny fantsona fantsom-piarovana ho fiarovana ny sidina fiaramanidina izay tena ilaina tokoa ny fangejana ny mpandeha iray ho fiarovana ny ain'ny fanahy hafa rehetra. Tsy mandany vola firy izy io, mora tehirizina an-tsambo nefa tsy mandray toerana manakiana, ary matanjaka. Matanjaka ampy hitazomana olona hipetraka - ary raha ilaina dia mangina - mandritra ny faharetan'ny sidina.
Ao amin'ny naoty mahatsikaiky, ao amin'ny sarimihetsika Sister Act 2, ny iray amin'ireo mpianatra tamin'ny fifaninanana fihira, Frankie, dia mampiseho an'i Masindahy Mary Patrick ny akanjo lava vaky zippery ary nilaza hoe: “Rovitra ity zavatra ity! Inona izao no tokony hataoko, huh? ” Namaly tamim-pahatoniana ny Rahavavy Mary Patrick: “Mihainoa, aza matahotra. Nilaza ny reniko fa tsy misy zavatra tsy azo atao raha mbola mitondra finoana kely sy horonan-tsarimihetsika lehibe ianao. ” Avy eo dia nokapohiny avy teo amin'ny fahazarany ny horonan-kasety fantsom-bolafotsy ary nesoriny ny fantsom-peo lehibe rehefa niteny izy hoe: “Salama!”
Tranga misy fantsona fantsona vao haingana
Andeha hojerentsika ireo tranga roa farany teo amin'ny rivotra izay nifarana tamim-pilaminana sy tamim-pilaminana avokoa ny horonam-peo majika vita amin'ny kasety fantsona volafotsy.
Tamin'ny 12 Jolay, vehivavy iray tamin'ny sidina American Airlines avy tany Dallas-Fort Worth nankany Charlotte no nisy fantsom-pifandraisana voalohany nopetahany takela-tànana sy ny tongony ary avy eo avy eo amin'ny sezany, rehefa tsy ampy handresena azy aorian'ny niezaka nanokatra varavarana tamin'ny fiaramanidina izy satria tsy tiany hiakatra intsony izany. Mpanampy amin'ny sidina nanaikitra koa ny iray nikarakara azy mba hitandroana ny fiarovana ireo mpandeha 190 ao anaty sambo.
Tamin'ny 3 Aogositra, voalaza fa voalaza fa i Maxwell Berry, lehilahy iray 22 taona tany Ohio nibitsibitsika ny tratran'ny mpikarakara fiaramanidina 2 nandritra ny sidina Frontier Airlines ary totohondry ny ampahatelony. Notampenan'ireo mpikarakara ny sidina tany amin'ny toerany nandritra ny andro sisa niainany ny dia avy tany Philadelphia ka hatrany Miami. Voasambotry ny polisy i Berry rehefa tonga tamin'ny batery 3 isa. Ny masoivohon'ny FBI teo an-toerana dia nilaza fa tsy hanenjika ny heloka bevava federaly.
Araka ny voalazan'ny Frontier, ny Ireo mpikarakara ny sidina dia hiatrika ny vokany, na dia tsy mazava amin'ny inona aza. Ny hany nolazain'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'izany dia: "Ireo mpikarakara ny sidina dia ho afaka amin'ny sidina rehefa miandry ny famotorana."
Famantarana ny niandohan'ny mistery momba ny fantsona
Ny Association of Flight Attendants-CWA, izay misolo tena ireo mpikarakara ny sidina Frontier, dia nanohana tamin'ny fony manontolo ny fihetsiky ny ekipa. Ny filohan'ny sendika, Sara Nelson, dia nilaza fa ny ekipa dia "noterena hanakana ny mpandeha amin'ny alàlan'ny fitaovana mety ho azon'izy ireo an-tsambo."
Raha ny filazan'ny sendika dia manome kasety an'ireo ekipa ny zotram-piaramanidina sao mila misakana mpandeha izy ireo. Tsy namaly fanontaniana momba izany ny Frontier.
Araka ny filazan'ny profesora iray momba ny fitantanana fiaramanidina ao amin'ny Metropolitan State University of Denver, Jeff Price, dia "mahazatra ny mampiasa duct tape mba hiarovana ny olona maneho ny loza mitatao amin'ny sidina na ny hafa." Nanazava izy fa ny sidina sasany dia misy fifehezana hafa eny an-tsambo, toy ny fluff cuffs, ary nilaza fa mitondra izy roa rehefa manidina “mandritra ny fotoana toa izao”.
Ka toa lojika ny fiheverana fa misy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sasany "nametraka" horonam-peo fantsona tamina arsenalin'ny seranam-piaramanidina mba hitandrovana ny filaminana sy ny filaminana mandritra ny 36,000 kilometatra. Miahiahy aho fa tsy betsaka, raha misy, ny mpandeha izay manohitra izany.